बहराइनमा रहेका अवैध नेपालीहरूका लागि आयो यस्तो खबर! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > बहराइनमा रहेका अवैध नेपालीहरूका लागि आयो यस्तो खबर!
admin December 21, 2020 प्रवास	0
दोहा : बहराइनमा गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीसहित बिदेशी कामदारले वैधानिक हुन् वा डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा मुलुक छोडि सक्नु पर्ने जनाएको छ । बहराइनस्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै बहराइनमा अवैध तथा कागजातविहीन (अनडकुमेन्डेट) नेपाली कामदारहरुले आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म बहराइन छाडिसक्नु पर्ने जनाएको छ । यदि समय सिमामा वैध भइसक्न वा देश छाड्न भनेपछि अबैध नेपालीहरू उत्साहित भएका छन् ।
यस प्रक्रियामा जना छुट्नु भएका नेपाली कामदारहरुले सो समय भित्रै अवसरको सदुपयोग गर्न पनि दूतावासले सबै नेपालीमा अनुरोध गरेको छ । बहराइनको लेवर मार्केट रेगुलेटोरी अथ्योरिटी (एलएमआरए) ले गत ७ अप्रिल २०२० देखिनै लागू हुनेगरी अवैध रुपमा रहँदै आएका आप्रवासी श्रमिकहरुका लागि आममाफीको घोषणा गरेको थियो ।
स्वदेश फर्किन समस्या भए सम्पर्क गर्नु : एनआरएनए बहराइन
कोरोना महामारीका करण श्रमिकहरुलाई कुनै समस्या भए सम्पर्क गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बहराइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । एनआरएनएले एक सूचना जारी गर्दै बहराइनमा कार्यरत दाजुभाई दिदि बहिनीहरु, कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका अथवा कोरोना महामारिका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन समस्या परेको भए सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ
खान बस्नको लागि समस्या भएका, अलपत्रमा परेका र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरुलाई तत्काल संघ समक्ष सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल जानको लागि हवाई टिकट पिसिआर परीक्षण लगायतमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
हैट के सारो छाडा भएका नेपाली दिदीबहिनीहरू? हेर्नुस त विदेशमा यस्तो चर्तिकला!